Tumira email kune mutariri wako: rudzii rwemhando yepamusoro fomula yekushandisa?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 29, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Mafomura ane hunyoro ekutaura nemutariri
Muchiitiko chehunyanzvi, zvinogona kuitika kuti tinotumira a tsamba kune waunoshanda naye padanho rimwe chete reukuru, kune ari pasi kana mukuru. Chero zvazvingava, mutsara wekuremekedza unofanira kushandiswa hauna kufanana. Kunyorera kune wepamusoro, kune mafomula akagadziridzwa zvakanaka. Kana zvikaitwa zvisizvo, zvingaita sezvisina hunhu. Muchinyorwa chino, tsvaga maitiro ane hunhu ekushandisa kune mutariri.
Nguva yekuisa mari
Kana tichitaura nemunhu wepamusoro-soro, tinowanzo shandisa "Mr" kana "Ms". Kuratidza kurangarira kune wako interlocutor, zvinokurudzirwa kushandisa capital letter. Hazvina mhosva kuti zita rekuti "Changamire" kana kuti "Madam" riri mufomu rekukwidza nyaya here kana kuti muchimiro chekupedzisira.
Pamusoro pezvo, zvinokurudzirwa kushandisa zvakare vara guru kuratidza mazita ane chekuita nechiremera, mazita kana mabasa. Naizvozvo tichati, zvichienderana nekuti tinonyorera mutungamiriri, dhikita kana mutungamiri, "VaMutungamiriri", "VaRector" kana "Vatungamiriri".
Ndeupi rudzi rweruremekedzo rwekupedzisa email nyanzvi?
Kupedzisa email yehunyanzvi kana uchitaura nemukuru wepamusoro, kune akati wandei mafomati ane hunhu. Nekudaro, ramba uchifunga kuti fomura ine ruremekedzo pakupera kweemail inofanirwa kuenderana neiyo ine chekuita nekufona.
Nokudaro, unogona kushandisa matauriro ekuremekedza kupedzisa email yenyanzvi, yakadai sekuti: "Ndapota gamuchirai Mr. Director, kutaura kwemanzwiro angu akasiyana" kana "Ndapota tendai, VaSachigaro uye CEO, mukutaura kwekuremekedzwa kwangu kukuru ".
VERENGA Ndeupi mutsara wemutsa unofanirwa kutevedzera "Pending…" chimiro?
Kuti uichengetedze ipfupi, chaizvo sekurudziro yeemail yehunyanzvi, unogona kushandisa mamwe matauriro ane hunhu senge: "Zvakanakai". Iyo nzira ine hunhu iyo inopa mubairo mukuru kune anopindirana kana mutori wenhau. Zvinonyatsoratidza kuti unomuisa pamusoro pe scrum maererano nechimiro chake.
Mukuwedzera, zvakakosha kuziva kuti mamwe matauriro kana matauriro eruremekedzo ane chekuita nekutaura kwemanzwiro anofanira kushandiswa nekuchenjerera kukuru. Izvi ndizvo zvinoitika kana mutumiri kana mugamuchiri ari mukadzi. Saizvozvo, mukadzi haakurudzirwi kuti ataure manzwiro ake kumurume, kunyange mutariri wake. Zvakasiyana ndezvechokwadiwo.
Zvisinei, sezvaungafungidzira, kutaura kworuremekedzo kwakadai sokuti “Wako nemwoyo wose” kana kuti “Kuperera” kunofanira kudziviswa. Asi, ivo vanoshandiswa pakati pevanoshanda navo.
Chero zvazvingava, hazvisi zvese nezvekushandisa zvine hunhu mafomula nemazvo. Iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune zviperengo uye girama.
Pamusoro pezvo, zvipfupiso zvinofanirwa kudziviswa, sezvinofanira kuita mamwe mazwi asina kururama akadai sekuti: “Ndinozvitenda” kana kuti “Ndapota bvuma…”. Asi, zviri nani kuti "Ndinozvitenda" kana "Ndapota gamuchira ...".
Tumira email kune mutariri wako: rudzii rwemhando yepamusoro fomula yekushandisa? November 29th, 2021Tranquillus
pashureNatsiridza maemail ako ehunyanzvi ane mafomula akagadziridzwa zvakanaka
zvinoteveraNdeupi rudzi rweruremekedzo rwekutumira kutenda mune email yehunyanzvi?
Semuenzaniso tsamba yekukumbira kuti ugamuchire payslip yako
Kuperetera zvikanganiso pabasa: unoonekwa sei neavo vanokuverenga?
Semuenzaniso tsamba yekukwikwidza kushongedzwa kwemubairo